तस्वीर आफैं बोल्दैन !
ओ कामरेड अझै चोरीको गाडी नछोड्ने ?
विद्रोह कालमा माओवादीले जनताका मात्र होइन सरकारी संस्थानका समेत सवारी साधन जबरजस्ती कब्जा गरे । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? भारतबाट चोरीका गाडी समेत भित्र्याएर आफ्नै जनसत्ताको नाममा चलाए । तर शान्ति सम्झौता पछि अनि आफैं पनि सरकारमा गएपछि पनि त्यस्ता चोरीका गाडी फर्काउनु पर्दैन त ?
यो माथिको तस्वीरको गाडी कसको हो चाहीँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन । सिंहदरबारमा रहेको माओवादी संविधानसभाको दलको कार्यालयमा पार्किङ गरिएको थियो । सरकार र माओवादी बीच गत वर्ष नै एक वर्षका लागि माओवादीले चलाएका चोरीका त्यस्ता गाडी चलाउन पाउने र त्यसपछि तिनलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमती भएको थियो । त्यसैको आधारमा सरकारले अरुको भन्दा भिन्नै नम्बरप्लेटको व्यवस्था पनि गरिदिएको थियो । तर आज सम्म पनि माओवादी नेता चोरी तथा लुटेको गाडीमा पंहेलो प्लेट राखेर चलाइरहेका छन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? सरकारी र नीजि नम्बर प्लेट हाल्ने पनि कम छैनन् । हैन ओ कमरेड चोरीका गाडी फिर्ता नगर्ने ?
के नेपाल सतीले सरापेको देश नै हो त ?
सानो देखी मैले सुन्दै आएको छु । नेपाल सतीले सरापेको देश हो रे । सराप पनि खतरा नै रहेछ । नेपालमा राम्रो गर्नेको कहिल्यै भलो नहोस् । त्यसरी सरापेको समय देखी सतीको सरापका कारण नेपालमा राम्रो गर्न खोज्नेको कहिल्यै भलो भएको छैन रे ।
रुख पनि सिधा भयो भने पहिले काटिन्छ रे अनि मान्छे असल भयो भने छिटो मासिन्छ रे ! सुनेको हो सानामा । नेपालमा पनि भएको छ त्यही नै । राजा वीरेन्द्रको सारा वंश नै उनी असल भएका कारण खतम भयो । मदन भण्डारीलाई सडक दुर्घटनामा पारियो । वीपीलाई पनि बाँकी राखिएन । नेपालको शिर उच्च राख्न भारतसँग नझुकेकै कारण महेन्द्रले आत्महत्या गर्नुपर्‍यो ।
भिमसेन थापा, अमरसिंह थापाले देशको लागि भलो सोच्दा आत्महत्या गर्नुपर्‍यो । यस्ता सयौं उदाहरण छन् इतिहासमा । जसले भलो गर्‍यो कि मर्‍यो ।
पृथ्वीनारायण शाह श्री ५ बडामहाराजाधिराज, जसले आफ्नो सम्पूर्ण युवाकाल रणमैदानमा बिताएर सुन्दर, शान्त अनि विशाल नेपाल सृजना गर्‍यो उनैका सालिक चोकमा तोडिएको अवस्थामा छ । आज नेपाललाई भारतीय शासकका सामु झुकाउन तल्लिन चाकरहरुको सम्मान भइरहेको छ । तथानाम राष्ट्रिय स्रोत साधन भारतीय शासन समक्ष बुझाउने अनि राष्ट्रघाती सन्धी गर्नेहरु, नदी सँगै राष्ट्रिय स्वाभिमान बेच्नेहरु ठूला भएका छन् । सम्मानित भएका छन् ।
राजतन्त्र अनि गणतन्त्रको नाममा नेपालको इतिहास मेट्ने अनि नेपाली पहिचान खतम गर्ने खेल सुरु भएको छ । सत्ता टिकाउन भारतीय आशिर्बादका लागि राष्ट्रघात गरिएको छ । ऐतिहासिक व्यत्तित्वका नाम अनि शालिक भञ्जन गर्नेहरु बढेका छन् ।
तर इतिहासमा काला काम गर्नेहरुको राज चलेको छ । नरसंहार मच्चाएरै राणाहरुले १०४ वर्षशासन गरे । त्यस्तै नरसंहार चलाएर अहिले माओवादी पनि सरकारमा आसिन भएका छन् ।
आज माओवादीको त्यही सरकारले राजाका नाममा भएको भन्दै विभिन्न तीन नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेको छ । जसअनुसार
गोरखाको पृथ्वीनारायण नगरपालिका - गोरखा नगरपालिका हुनेछ, दाङको त्रिभुवन नगरपालिका - घोराही नगरपालिका र महेन्द्रनगर नगरपालिका - भीमदत्त नगरपालिका
आफ्नो सिद्धान्त विपरितका व्यक्तिका सबै अवशेष र इतिहास मेटाउन खोज्ने माओवादीको नियतका साथ इतिहासमा राज गरेका नेपाली राजाका नाममा राखिएका सबै स्थानका नाम परिर्वतन गर्ने काम भएका छन् । विगतमा भावावेशमा आएर नेपाली काँग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक मुल धार सम्हालेको भन्ने पार्टी पनि यस्तै अतिवादी निर्णय गरेको थियो । यो सरासर अतिवादी निर्णय हो माओवादी सरकारको । आफूलाई साथ अनि मत नदिनेको ज्यानै लिनेहरुले नाम फेर्नु ठूलो र अचम्म लाग्दो कुरा चाहीँ होइन । तर यसले नेपालमा बढिरहेको अतिवादी सोचलाई देखाउँछ । मुलधारका दल नै अतिवादमा लागे भने यही रुपमा अगाडी बढे भने नेपाल अफगानिस्तान बन्न बेर लाग्दैन । अतिवाद नै त्यो गोरेटो हो जुन आतंकवादमा गएर टुंगिन्छ ।
के नेपाल साँच्चिकै सतीले सरापेको मुलुक हो ? के यहाँ राम्रो सोच्ने अनि गर्नेको कहिल्यै भलो हुँदैन ? अनि मृत्युपछि पनि हुँदैन त ?
संसदिय प्रजातन्त्र भएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्यमा वर्षो एकपटक मात्र छिर्न पाइन्थ्यो रानीपोखरीमा । अरु बेलामा बाहिरबाट हेरेरै मन बुझाउनुपर्ने ।काठमाण्डौं महानगरपालिकाको नाफाखोरीका कारण महोत्सव गर्दा पैसा तिरेर भित्र छिरे हो नत्र त उही भाईटिका कुर्नुपर्‍थ्यो । पछि पुनस्थापित संसदबाट बनेका सरकारले छठका लागि पनि मन्दिर बाहेक रानीपोखरी परिसर खुला गर्ने गरेपछि वर्षो दुई दिन भित्र छिर्न पाउने त अधिकार नै भयो । आफू भाईटिकामा छिर्न नजाने अघिल्ला छठमा पनि नगएको आज साँझ छिरें रानीपोखरी । अनि खिचियो फोटोहरु खच्याक खच्याक । शिवमन्दिर र रानीपोखरी एंगल एंगलबाट खिचियो नि हेर्नुस् न ।
लेबल: जीवन शैली, धर्म
नयाँ नेपालको नयाँ बिहे
मंसिर आउन अझै एक महिना बाँकी छ । वैदिक तरिकाले विवाह गर्ने हो भने । नत्र त आजकलको विवाहका लागि केहीले छेक्दैन केटा केटीको कुरा मिले पुग्छ । न साइत न त चिना नै जुराउनुपर्ने । त्यसैले त भन्नेहरुले बाटो राख्देका छन् मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ।
काजीले मात्र होइन दुई जनाको सहमती भएपछि कसैले केही गर्न सक्दैन हो विवाहको मामलामा । त्यसमा पनि नयाँ नेपाल नयाँ थालनी गर्ने समय छ । नेपाल नै नयाँ भएपछि अब जिवनशैली र पद्दती पनि त नयाँ हुनुपर्‍यो नभए बनाउनु पर्‍यो चलन हैन ! त्यस्तै नयाँ विवाह पद्दतीको सुरुवात गरेका छन् दमकका एक जोडिले ।
विजया दशमी नेपालीहरुको महान र राष्ट्रिय पर्व । लामो बिदा अनि पारिवारिक जमघट । यही लामो बिदा र भरखरै प्राप्त भएको नयाँ क्यामेराको सदुपयोग गर्न म पनि हिंडे फोटो खिच्न ।
पंक्षिको तस्विर खिच्न हिंडेको म उडेपछि एउटा डाँडाबाट अर्कोमा पुग्ने चरा भन्दा पनि फुर्र फुर्र गर्ने पुतलीको पो पछि पछि लागें त । यि नै हुन मेरा पुतली .........
हृयाप्पी बर्थ डे टु मी
आज मेरो जन्मदिन । आजैबाट मैले कटुवाल डट कमलाई नियमित ब्लग बनाउने निर्णय गरेको छु । आज जन्मदिनको सानो तिनो पार्टी गरेको कारण थकानले केही लेख्ने मुड छैन भोलि देखि नियमित लेख्ने नीतिगत निर्णय गरेको छु ।
आजको दिन बहुत रमाइलो बित्यो । बुबाले विहान चार बजे नै फोन गरेर शुभकामना दिनुभएको थियो त्यसको दश मिनेट पछि नै मेरा हजुरबुबा र हजुरआमाको फोन आयो । भाईले हृयाप्पी बर्थ डे टु यू भन्दै मलेशियाबाट फोन गर्दा त बहुत आनन्द लाग्यो । मेसेजका टोनले पनि विहानभर धर दिएनन् । देश विदेशमा रहेका साथीहरुको फोन र मेसेज रिसिभ गर्दैमा दिन ढल्यो । साँझ चार बजे सानो पार्टी कलेजका साथी र अंकल, दाई अनि दिदीका साथमा । साँझ लोडसेडिङ दिन चैट ।
केही तस्विरहरु जन्मदिनका
नेपाल एकिकरणमा लागेका बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको दिनमा काठमाण्डौं माथि विजय प्राप्त गरेको इतिहास भएको देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इन्द्रजात्राकै समयमा भारत गएका छन् । के उनले पनि कुटनीतिक क्षेत्रमा सफलता पाउलान् त ?
साँझको पशुपति र साझा चितामा जल्नेहरु
लेबल: जीवन जगत
बादलको सन्दर्भलाई जोडेर धेरै गीतकारले गीत लेखेकाछन् त धेरैसंगीतकार र गायकले त्यसमा संगीत र स्वर दिएका छन् । चाहे बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपोस् या बादलुको देशमा हराउन मनलागोस् ।
सानो छँदा म पनि आकाशमा बादलका विभिन्न आकार हेरेर रमाउने गर्दथें कतै बिरोलो जस्तो त कतै मान्छे जस्तो आकार बादलको । अनि हावा सँगै बादलको परिवर्तित गति ओह कति रमाइलो। बादलको रंग सँगै सानामा दंग परेको फ्यासब्याकमा पो पुगें म त !
पतिको दिर्घायुका लागि आफ्नै आयु घटाउने ?
व्रि्रोहीबाट सत्ता सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल आज चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । नेपालको विशेष सम्बन्ध भएको भनिएको भारतको भ्रमण नै नगरी प्रधानमन्त्री चीन जानुले विशेष राजनीतिक महत्व राख्ने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री चीन जानु अगाडी नै भारतले भारत भ्रमणको निम्तो दिएको र प्रधानमन्त्रीलाई चीन नजान नाजायज दबाब दिएको भन्ने कुरा शहरमा चर्चामा रहेको छ ।
लेबल: तस्वीर अर्केको
लेबल: तस्विर अर्कैको
हिन्दीमा सपथ लिएका र हिन्दीलाई नै नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनाउने आफ्नो मधेशी जनाधिकार फोरमको नीति बताउने परमानन्द झालाई कीर्तिपुरका युवाले यस्तो रुप दिए । भारतीय झण्डा सहितको ब्रिफकेस साथै बन्दुक पनि उनको साथमा देख्न सकिन्छ भने उनको ढाडमा के लेखिएको छ त्यो त तस्विरमै स्पष्ट सँग देखिएको छ ।
लेबल: गाईजात्रा २०६५
अन्तिम हिन्दू राजा
Madan's Resource Center ¦ मदनको स्रोत केन्द्र
MY SMS WORLD...
आफ्नै कुरा आफ्नै पारा !
मदन मणि अधिकारी
स्थायी ठेगाना छाङ ४ पिपलटार तनहुँ, हाल मैतीदेवी, काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास । पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल एवं आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत । मदन मण्डारी मेमोरियल कलेज रातोपुलमा फोटोपत्रकारिता प्राध्यापन सम्पर्क– madanm05@gmail.com ९८४१५४१९११, ९८०४१०८२२० पिता हुतमणि अधिकारी एवं माता सरस्वती अधिकारी । पिता सरकारी जागिरे र माताको आफ्नै व्यवसाय ।
तस्वीरहरु इमेलमा हेर्न यहाँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस
यहाँ आफ्नो इमले ठेगाना भर्नुहोस:
फेडबर्नर मार्फत तपाइँलाई पठाइने छ !
तस्विर अर्कैको (3)
आफ्नै गन्थन (2)
गाईजात्रा २०६५ (2)
SLC 1st Division 2064 (1)
SLC 2nd Division 2064 (1)
SLC 3rd Division 2064 (1)
SLC DISTINCTION 2064 (1)
आफ्नै कुरा (1)
तस्वीर अर्केको (1)
बालखामा म (1)
रमाइला तस्वीर (1)
व्यापार वाणिज्य (1)